Isi > Ahịa nke ndị na-ere ahịa > Ebee ka ị ga-ezu ike na November - N'ezie na Greece na BInomo bụkwa n'efu
09.08.2018 · 0 · Ntinye niile maka August 2018
Chọrọ ịma ebe ị ga-ezu ike na November? Ịchọrọ inweta ezumike nke abụọ site na Binomo na n'enweghị mgbalị ọ bụla? Na e wezụga ịmụta ịhazi ụgbọ mmiri a na Gris? Ma anaghị akwụ ụgwọ penny n'otu oge ahụ? Gụọ ma chọpụta otú e nwere ike isi mee ya na otu n'ime usoro nzụpụta kachasị mma n'ahịa.
Ebee ka ị ga-ezu ike na November
Ebee ka ị ga-ezu ike na September nke a na-echegbu ọtụtụ ndị. Ma maka ndị ahịa Binomo, e meelarịrị ya. O zuru ezu iji kere òkè n'ime ihe ahụ Binomo ma nweta ezigbo ohere iji gaa Gris na-acha anwụ anwụ iji kere òkè na nkwụghachi maka ndị mbido. Ma ọ bụghị ọhụụ na ahia, n'ezie, mana maka ndị yachtsmen ọhụrụ.
Ya mere, olee ihe nhazi trading nke Binomo maka ndị ahịa ya maka November 2018?
Ndị òtù Binomo kwadebere ọmarịcha njem - ịbịanye aka na AFR regatta - ihe nrịta kasị ukwuu maka ndị na-asụ asụsụ Russian. A na-emeghari ego a kwa afọ na Osimiri Saronic. Site na 2017, ụlọ ọrụ ahụ Binomo ghọrọ ihe n'ozuzu nke ihe omume a. 8 November Binomo flotilla ga-agbakọta na 50 yachts ga-aga n'àgwàetiti Greece.
Kedu ihe na-echere ndị sonyere mweghachi na November?
Osimiri azure kasị mara mma na Gris.
Ịmụta ijikwa ụgbọ mmiri na oké osimiri nke mmetụta uche si na igwu mmiri.
Ala ndị a na-apụghị ichefu echefu, mmiri ozuzo, ebe ndị ga-abụ ihe ncheta maka ndụ.
Ezumike zuru oke, ihe ndị na-egosi na ọ gaghị ada mbà ruo ogologo oge.
Na-egwuri egwu n'ọdụ ụgbọ mmiri ahụ nke mara mma mara mma.
Ntak emi isan̄de ke ndifiak
Mụta otu esi akwọ ụgbọ mmiri
Enweghị okwu nkuchi na-agwụ ike - a na-amụ ihe niile na ụgbọ mmiri. Onye na-eme njem nwere ahụmahụ ga-agwa gị ihe ị ga-eme ma gosi otú. Ị nwere ike iche na ọ bụ dike nke ihe nkiri nkiri njem, na-ahapụ naanị ya na oké osimiri n'elu ụgbọ mmiri ngwa ngwa. Oge eruola igosi ihe mmiri ahụ ma gaa maka nkọwa doro anya!
Njem ahụ bụ nanị Binomo
Ọ dịghị mkpa ịkwụ ụgwọ maka ihe ọ bụla. Ọ bụrụ na ị nọ na nkwụghachi, mgbe ahụ, òtù Binomo na-etinyekwu aka na ya. Nri, ebe obibi, ụgbọ elu - niile gụnyere. Ndị dị otú a gụnyere ị gaghị ahụ na ụwa dum!
Ị nwetara ụgbọala na mmetụta uche na-enweghị atụ
Yachting bụ ezigbo egwuregwu maka ezigbo ndị ahịa. Gaa n'ihu izute njem. Ịgakwaghị enwe ike ijikwa ihe ọ bụla dịka ị na - azụ ahịa - ugbu a ị nwere ike ịga ezigbo nkwụsịtụ!
Hụ otú ọ dị na 2017:
Ihe a na-eme: AFR`2017 Greece si Seanation on Vimeo.
Otu esi esonye na nkwụghachi
Iji nweta ihe omume a dị ịrịba ama, ọ ga-ezuru ime ihe 3 dị mfe. ha agagh ewe oge buru ibu, mana ha nwere ike iweta ihe n 'ajuju!
Debanye aha na ikpo ahia Binomo.
N'elu ego n 'ego nke 30 dolla. Jiri koodu mgbasa ozi REGATABINOMO18. Ọ ga-enye ohere ịkebanye na ngwugwu nke tiketi maka regatta ma nweta 50% ego na nkwụnye ego.
Soro mail. 20 September 2018 ga-adọta tiketi na akwụkwọ ozi mmiri ga-abịakwute ndị mmeri.
Ugbu a ajụjụ banyere ebe ị ga-ezu ike na November 2018 maka ndị na-agụ akwụkwọ anyị ka emechibidoro. Anyị na-achọ ka unu niile nwee mmeri n'ọfụfụ ahụ na akwa ezumike na nlọghachi na Gris.
Debanye na Binomo ma gaa Gris!
October ga - ekpo ọkụ - agha nke ndị ahịa amaliteworị!
October ga-ekpo ọkụ - agha ...
Ihe ngosi Ichimoku na-egosi webinar n'efu. Echefula ya
Ichimoku indicator bụ n'efu ...
Nsonaazụ nke ndị ahịa maka 1 nde na Binomo - echere echiche!
Nsonaazụ nkwekọrịta ahia 1 ...
Ọnọdụ VIP dị ka Olympus Trade
VIP ọnọdụ 4.7 93 (20%) XNUMX votes ...
Usoro Ihe Ị Ga-eme
Dell bu ụzọ bipụtara akụkọ mgbe o mesoro EMC Corp.